December 30, 2015 – Vanoda Zvinhu
Ndakanga ndichangoti tangei kutiwo netsweyi nemboro, apo yakanga yongopota ichimira pose pose apo kana ndaona matako kana zvidya zvefanta kana nyangwe baby rikagara beya. Mboro yangu zvino yakanga yoziva chayakasikirwa. Yakanga yoda kusvira. Mawet dreams akanga owanda. Raiva gore 1997 apo ndakanga ndiri form 2. Taigara neimwe hama yangu ainzi
Haa things never change vakoma ndabvuma hangu murume wese ihure nomatter how much we try to be faithful. I went to Fio after tavhara kubasa and i was staying near CJ Hall uko kune vanoziva Fio. One day ndichidriver hangu i saw this beautiful woman achifamba akabereka mwana. Mai vaive
Ndakanga ndanzwa nenhomba yekuda chicken ndikati rega ndiende kunotenga huku kwababa vaBill vanogara muraini mangu tingati dzimba ina kubva pamba pangu. Ndakapinda pagedhi ndokunanga kunogogodza padoor ravo, pasina chinguva door rakavhurwa wanike baba vakapfeka kashort, munozivawo kuti ziso harina muganhu, ndakatarisa paburugwa pavo ndikaona zimboro rakadhindikira, rairatidza kuti baba vakanga